ဗုဒ္ဓသာသန့ရံသီအသင်းမိသားစုများမှ နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်နေသည့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ မြတ်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အား အမှူးပြု၍၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကြွရောက်လာသည့် ဖြူးဆရာတော် ဒေါ်က်တာ အဂ္ဂဝရ နှင့် ပင့်သဃာ ၄ပါး တို့အား ဝါဆိုသင်္ကန်းနှင့်တကွ လှူဒါန်းဖွယ်ရာအစုစုတို့အား ဆက်ကပ်လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ပါ၍ အောက်ဖေါ်ပြပါ အစီစဉ်အတိုင်းကျင်းပ ပြုလုပ်သွားမည့်အကြောင်း လေးစားစွာဘိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေရာ။ ။ SAALBAU NIED
အချိန်။ ။ နံနက် 10.00 နာရီမှ 16.00 နာရီ
တရားနာယူချိန်။ ။ နေ့လည် 13.30 နာရီ
အစီစဉ်။ ။ သဒ္ဓွါကြည်လင် ဆွမ်းအလှူရှင်တို့ ညီတူမျှဝေ စုပေါင်းဆွမ်းအလှူ ကုသိုလ်ရပါစေကြောင်း အကျိုးငှါ ဆွမ်း၊ ဆွမ်းဟင်း၊ အချိုပွဲများကို ကိုယ်တိုင်လာရောက် ဆက်ကပ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ဦးသိန်းယု မိသားစုနှင့် ဦးအောင်ဇေယျ တို့မှ ကြွရောက်လာသည့် ဧည့်ပရိတ်သတ်များအား ကြာဇံချက်ဖြင့် ဧည့်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
အလှူရှင်များ လှူဒါန်းလိုပါက ကြွရောက်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ဒုတိယဖြူးဆရာတော် ဒေါ်က်တာ အဂ္ဂဝရ ဒုတိယအကြိမ် ဥရောပ သာသနာပြု ခရီးစဉ် ကြွရောက်လာမည့် အကြောင်း
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ် ဓမ္မရက္ခိတ ဖြူးမဟာစည် သာသန့ရိပ်သာကျောင်းတိုက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကျောက်ရေတွင်း မြောက်ပိုင်း ရတနာစိန်စည် ပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ဖြူးမြို့၊ ဖြူးမဟာစည်သာသန့ရိပ်သာကျောင်းတိုက် တို့၏ ပဓာန နာယကဆရာတော် ဒေါ်က်တာ အဂ္ဂဝရ သည်
ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဖရန့်ဖတ်မြို့သို့ 24.07.2015 (သောကြာနေ့) နံနက် 6.00 နာရီတွင် ဖရန့်ဖတ်လေဆိပ် သို့ ရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာတော်အား ကြိုဆိုနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာများအား အသိပေးတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ဖြူးဆရာတော်၏ ဥရောပ သာသနာပြု ခရီးစဉ်။ ။
- 25.07.2015 ဒေါ်ကြည်ကြည်မြင့် အိမ်တက်မင်္ဂလာ Stuttgart မြို့
- 27.07.2015 မှ 31.07.2015 အီတလီ၊ ပြင်သစ် ခရီးစဉ်
- 01.08.2015 မှ 03.08.2015 နယ်သာလန် ခရီးစဉ်
- 07.08.2015 မှ 09.08.2015 ဒိန်းမတ် ခရီးစဉ်
ခရီးစဉ် အပြောင်းအလဲရှိခဲ့ပါလျှင် ထပ်မှန်အသိပေးပါမည်။
သဒ္ဒါကြည်လင် ဓမ္မမိတ်ဆွေများ ဆရာတော် ဖရန့်ဖတ်မြို့တွင် ရှိစဉ်ကာလ အာရုံဆွမ်း၊ နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းလိုလျှင်
- ဦးသိန်းယု 069 24004701 / 01520 2325633
- ဦးအောင်ဇေယျ 01521 7084300
Germany နိုင်ငံ Hamburg မြို့နေ ကိုဖရန်ကီထွန်း ၏ဇနီး မရိုစီ(၄၈ နှစ်) သည် ၂၄,၁၁,၂၀၁၄ နေ့တွင် Hamburg မြို့ဆေးရုံ၌ ဆုံးပါးကွယ်လွန်ပါသဖြင့် မိသားစုနှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းရပါကြောင်း ဗုဒ္ဓသာသနာ့ရံသီအသင်းမှ မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။ ၁,၁၂,၂၀၁၄ နေ့တွင် Hamburg မြို့ ကျန်ရစ်သူမိသားစုနေအိမ်၌ အောင်းမေ့သတိရဖွယ်ရက်လည်အခမ်းအနားပြူ့လုပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း Germany နိုင်ငံတွင်းနေ မိတ်ဆွေတို့အားဖိတ်ကြားအသိပေးအပ်ပါသည်။
2014 December 28 ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်သို့ အောက်ပါအစီစဉ်တိုင်းကြွရောက် နွှဲပျော်ပါရန် ဗုဒ္ဓသာသနာ့ရံသီအသင်းမှ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ဓမ္မကထိကအကျော် ဓမ္မစေတီဆရာတော် ဓမ္မသဘင်
ဓမ္မစေတီဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကောသလ္လအရှင်သူမြတ်သည် ဂျာမနီနိုင်ငံ ဖရန့်ဖွတ်မြို့သို့ကြွရောက်၍ သံသရာမှလွတ်မြောက်ကြောင်း တရားရေအေး တိုက်ကျွေးမည်ဖြစ်ပါ၍ ကြုံခဲလှစွာသောဆရာတော်၏ ဓမ္မသဘင်သို့ ကြွရောက်တရားနာယူကြပါစေကြောင်း သာသနာ့အကျို မျှော်ကိုး၍ ဗုဒ္ဓသာသနာ့ရံသီ ဒါယကာ,ဒါယိကာမများမှ အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း လေးမြတ်စွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေရာ ။ ။SAALBAU TITUS FORUM (NORDWEST ZENTRUM)
နေရက် ။ ။ ၂၇. ၀၇. ၂၀၁၄ (တနင်္ဂနွေနေ့)
အချိန် ။ ။ နံနက် ၁၀.၀၀ မှ မွန်းလွဲ ၁၆.၀၀ နာရီ ထိ
တရားနာယူချိန်။ ။ နေ့လည် ၁ နာရီတိတိ (၁၃:၀၀ နာရီ)
အစီအစဉ် ။ ။ သဒ္ဓါကြည်လင် ဆွမ်းအလှူ့ရှင်တို့ ညီတူမျှဝေ ဆွမ်းအလှူ ကုသိုဟ်ရပါစေကြောင်းဖြင့် နံနက် ၁၁.၀၀ နာရီ တိတိအချိန်၌ ကြွရောက်လာမည့် ဓမ္မစေတီဆရာတော်နှင့် Frankfurt မြို့၌သီတင်းသုံးနေတော်မူကြသောသံဃာတော် ၃ပါးတို့အား နေ့ဆွမ်းစုပေါင်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ပါ၍ ကုသိုဟ်ပါဝင်လိုကြသည့် ဆွမ်းအလှူရှင်တို့အနေဖြင့် မိမိတို့တပိုင်တနိုင် ဆွမ်း,ဆွမ်းဟင်း,ခဲဖွယ်ချိုချင်ပွဲ တို့ဖြင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆွမ်းစုပေါင်းကပ်လှူကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ သံဃာတော်တို့ဆွမ်းစားပြီးပါက ကြွရောက်သည့်ဓမ္မမိတ်ဆွေ ဧည့်ပရိတ်သတ်တို့အား...
1.ကိုစိုးလွင်-မမင်းမင်းလှိုင် မိသားစုမှ မြန်မာထမင်းဟင်းလျာအဖွယ်အရာများ.
2.ဒေါ်နွယ် မှ ဆိတ်ကလီစာ ဟင်းလျာ
3.ကိုကြည်လင်-မသော်တာ မိသားစုမှ ငါးဖယ်ဟင်း
4.ကိုသက်အောင်-မလွင်လွင်လှိုင် မိသားစုမှ ဝက်သားနီချက်
5.ကိုမင်းဟန်-မသိံဂီ မိသားစုမှ ပဲပြုတ် မျှစ်ကြော်
6.မစံပယ်လွင် မှ ပဲကုလားဟင်း နှင့် သောက်ရေသန့်,အချိုရည်မျိုးစုံ တို့ဖြင့်ကျွေးမွေးလှူဒါန်းကြပြီးလျှင်,,,
7.ကိုမင်းဦး-မပြုံး မိသားစုမှလည်း ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ဘုရားပန်းတော်အလှူများဖြင့် လှူဒါန်းသမှူ့ ဒါနပြူ့ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
သဒ္ဓါတတ်အားနည်းများမဆို ဒါနကုသိုဟ်ပါဝင်လိုကြမည့် စေတနာအလှူ့ရှင်တို့မှလည်း အောက်ပါအကျိုးတော်ဆောင်များနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ကြပါသည်။
ကိုစိုးခင် 06925786776, 01786362872
ကိုအောင်နိုင်ထွေး 069 90753529, 015226817771
ဗုဒ္ဓသာသနရံသီအသင်းမှ ဝမ်းမြောက်နုမော် သာဓု,သာဓု,သာဓု ခေါ်၍ ကျေးဇူးဥပကာရအထူးတင်ရှိပါသည်
ဖြူးဆရာတော်၏ ဓမ္မသဘင်ပူဇော်ပွဲသို့ ကြွရောက် တရားနာယူကြ၍ လှူဒါန်းသမှူ့ ဒါနပြူ့ခဲ့ကြပါကုန်သော Wiesbaden , Offenbach , Frankfurt နှင့်အနီးတဝိုက်နေ ဓမ္မသူတော်စဉ်များ , သဒ္ဓါကြည်လင် ဆွမ်း, ဆွမ်းဟင်း, ခဲဖွယ်ချိုချဉ် အလှူ့ရှင်များ ,ဧည့်ခံကြွေးမွေးလှူဒါန်းရန် ဝယ်ယူချက်ပြုတ်သည်မှစ၍ ခန်းမတွင်းဧည့်သည်တို့အား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ခပ်ယူစီမံ ဧည့်ခံကြွေးမွေးသည်အဆုံး ဝေယျာဝစ္စဒါန ကုသိုဟ်ပြူ့ခဲ့ပါသော ဦးလှစု-ဒေါ်စိုးစိုးသိန်း နှင့် သား , သမီး မမာလာသင်း မိသားစု ,ဧည့်ပရိတ်သတ်တို့အား တို့ဟူးသုတ်, ကျောက်ပွင့်သုတ်, နှင့် အခြားအမွန်အမြတ်ဟင်းလျာများ, ကျောက်ကျော, ရွှေကြည်နနွမ်းမကင်းစသည့် မြန်မာ့ရိုးရာမုန့်မျိုးစုံ စသည်တို့ဖြင့် မိမိတို့တပိုင်တနိုင်ချက်ပြုတ်ယူဆောင် ကြွေးမွေးလှူဒါန်းခဲ့ကြပါသော အလှူ့ရှင်များ(အလှူ့ရှင်အမည် နှင့် လှူဒါန်းသည့်ဟင်းလျာ တိတိကျကျမမှတ်ယူခဲ့နိုင်၍ မဖော်ပြနိုင်ခြင်းအား အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်) , ဆရာတော် အသုံးပြူ့ရန် တယ်လီဖုန်းကဒ်မှအစ ယာဉ်အလှူအဆုံး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လိုက်လံမောင်းပို့ ကုသိုဟ်ယူခဲ့ပါသော ကိုဝင်းကိုမြတ် , ပူဇော်ပွဲသဘင် အခမ်းအနားမှူးလုပ်၍ ကုသိုဟ်ပြူ့ခဲ့ပါသော ကိုမျိုးဇော်နှင့် ပွဲစမှ ပွဲဆုံး ပူဇော်ပွဲအတွက် ယာဉ်အလှူ ကုသိုဟ်ယူခဲ့ပါသော မရွေးရွေးမော် မိသားစု နှင့်ကိုစိုးခင် , ဓမ္မဒူတကျောင်း သံဃာများ ကြိုပို့ ယာဉ်အလှူကူသိုဟ်ယူခဲ့ပါသော ကိုဖုန်းနိုင် , အခမ်းအနားပွဲစ အပြင်အဆင်ကုသိုဟ်ယူခဲ့ပါသော ဦးတင်ဖေ, ဦးကြည်ဝင်း,ကိုကြည်လင်, ကိုအောင်ကြီး , အခမ်းအနားပွဲပြီး သိမ်းဆည်းသန့်ရှင်းကုသိုဟ်ယူခဲ့ပါသော ကိုအောင်နိုင်ထွေး, ဦးလှစု နှင့် သား , သမီး မိသားစု တို့နှင့် သီးခြားဖော်ပြပါ အလှူ့ရှင်အားလုံးတို့အား ဗုဒ္ဓသာသနရံသီအသင်းသာသနာ့ဒါယကာ,ဒါယိကာမများမှ ဝမ်းမြောက်နုမော် သာဓု,သာဓု,သာဓု ခေါ်၍ ကျေးဇူးဥပကာရအထူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
ဓမ္မသဘင်ပူဇော်ပွဲနေ့ သင်္ကန်း အလှူ ရှင်များ
ကိုသိန်းဇော်-မစန်းစန်းမြိုင် မိသားစု Offenbach
ကိုအောင်ကြီး-မစိမ့်စိမ့်လှိုင် သား မောင်သုတအောင် မိသားစု
မခင်သူဇာ သား မောင်သန့်ဆက်ဝေ မိသားစု
ကိုမျိုးဇော်-မရွေးရွေးမော် သမီး မသျှင်းဏီချယ် မိသားစု
ဦးမျိုးမင်း-ဒေါ်သန်းသန်းဦး မိသားစု Höchst
ကိုတိုးအောင်ထွန်း-ဒေါ်အေးအေးကြည် မိသားစု Offenbach
မနန်းခမ်းပေါင် မိသားစု Offenbach
ကိုညီညီ-မသန်းသန်းဝင်း သမီး မဆုယမင်းသူ မိသားစု
ကိုနေဝင်းလှိုင်-မမိစံ သမီး မဇူးဇူးလှိုင် မိသားစု
ကိုလှမောင်သန်း-မစောစန္ဒလင်း သမီး ဂျူ လီယာ သား လီယွန် မိသားစု
ကိုခင်မောင်ဆွေ-မနွဲ့ယဉ်ယဉ် သားကြီး ထက် သားငယ် ကျော် မိသားစု Offenbach
ကိုရှိန်း-မနန်း Wiesbaden ၅၀ ယူရို
ဒေါ်တင်တင်မြင့် ၃၀ ယူရို
ကိုသိန်းနိုင်ဆွေ ၂၅ ယူရို
ဦးကြည်ဝင်း မိသားစု ၂၀ ယူရို
မိသားစု Darmstadt ၂၀ ယူရို
ကိုစိုးမြင့်-မထွေးထွေး ၂၀ ယူရို
ဒေါ်ကျင်သန်း ၂၀ ယူရို
ကိုအေးမင်း ၁၀ ယူရို
ဦးလှ-ဒေါ်ခင်ထွေး ၁၀ ယူရို
ကိုဝင်းနိုင်ဦး(ကိုဆန်နီ) ၁၀ ယူရို
ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံတိဋ္ဌတု , ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံတိဋ္ဌတု , ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံတိဋ္ဌတု
သာဓု, သာဓု, သာဓု။
ဒုတိယဖြူးဆရာတော် ဥရောပ ဓမ္မဒူတခရီးစဉ်
၂၃.၀၅.၂၀၁၄ သောကြာနေ့ ကိုမျိုးလင်းအောင်(ကိုရာဂျူး) - မလွင်လွင်ထိုက် သမီး မဟန်နီမျိုး မိသားစုတို့မှ နေအိမ်၌ ဆရာတော်အားနေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါမည်။
၂၄.၀၅.၂၀၁၄ စနေနေ့ ဒေါ်ကျင်သန်း သမီး မမေထက်ကျော် တို့မှ နေအိမ်၌ ဆရာတော်အားနေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါမည်။
၂၅.၀၅.၂၀၁၄ တနင်္ဂနွေနေ Saalbau Bornhem ခန်းမ ၌ဆရာတော်၏ ဓမ္မသဘင်ပူဇော်ပွဲ ပြုလုပ်ကျင်းပပါမည်။
၂၆.၀၅.၂၀၁၄ မှ ၂၉.၀၅.၂၀၁၄ ထိ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့ သို့ ဓမ္မဒူတခရီးစဉ်ကြွရောက်ပါမည်။ ၂၉.၀၅.၂၀၁၄ နေ့ ဖရန့်ဖွတ်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပါမည်။
၃၀.၀၅.၂၀၁၄ သောကြာ နေ့ ကိုဇော်ဝင်း - မသက်နု တို့မှ နေအိမ်၌ ဆရာတော်အားနေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါမည်။
၃၀.၀၅.၂၀၁၄ သောကြာ နေ့ ညနေပိုင်း၌ ဆရာတော်သည် နယ်သာလန်နိုင်ငံ နှင့် ဘယ်ဂျီယမ်နိုင်ငံများသို ဓမ္မဒူတခရီးစဉ့်ကြွ ရောက်၍ ၀၂.၀၆.၂၀၁၄ နေ့ထိ သီတင်းသုံးပါမည်။
၀၂.၀၆.၂၀၁၄ နေ့ ညနေပိုင်း ဖရန့်ဖွတ်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပါမည်။
၀၃.၀၆.၂၀၁၄ မှ ၀၅.၀၆.၂၀၁၄ ထိ ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းလိုကြသော သဒ္ဓါကြည်လင် ဆွမ်းအလှူ့ရှင်တို့အတွက် ဆရာတော်၏ ဓမ္မဒူတခရီးစဉ်အား ထပ်မံကြေညာပေးပါမည်။
ဆရာတော်သည် ၀၆.၀၆.၂၀၁၄ နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီချိန်၌ ထိုင်းလေကြောင်းဖြင့် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လည်ကြွရောက်ပါမည်။
ဗုဒ္ဓသာသနာ့ရံသီ သာသနာ့ဒါယကာ,ဒါယိကာမများမှ ဆရာတော်အတွက် ဆွမ်းအလှူကုသိုဟ်ဒါန အဖို့ဘာဂတို့အား ကြည်သာရွှင်ပျ ဝမ်းမြောက်နုမော် သာဓု,သာဓု,သာဓု ခေါ်ဆိုပါသည်။
နမ့်မွန်း-မိုင်းနောင်လမ်းပိုင်းအတွင်း ယာဉ်တိုက်မှုမှ ထွက်ပြေးသွား​သော ကားသမားအား ဖမ်းမိ